लिपुलेक अतिक्रमण : भारतको चपेटामा नेपाल ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
लिपुलेक अतिक्रमण : भारतको चपेटामा नेपाल !
२०७६ मंसिर १९, बिहीबार १३:१० गते
नेपालको अन्तिम उत्तरी गाउँ व्यास गाविसस्थित टिंकर क्षेत्रको उत्तरी हिमाली चीनसँग जोडिएको हिमाली बाटो लिपुलेक भारत र चीनबीच सम्झौता भएको त्यहीँ तल खोँचमा पर्ने भञ्ज्याङ हो, जो लिपुलेक भञ्ज्याङ भनेर चिनिन्छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ कालापानी क्षेत्र करिब आठ किलोमिटर तलै पर्छ । व्यास गविसको छाड्गु्रबाट कालापानी अथवा लिपुलेक पुग्न तीनवटा वैकल्पिक बाटो देखिन्छ ।
व्यासस्थित गागा व्यासको केन्द्रविन्दु रहेछ, यहाँबाट लिपुलेक अथवा कालापानी पुग्न सबैभन्दा सजिलो बाटो महाकालीपारिको भारतीय गाउँ गव्र्याङ क्षेत्र हो । यस क्षेत्रबाट जाँदा बाटो अहिले पनि भारतीय नागरिकले समेत पास लिएरमात्रै तिब्बत जान प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
गागादेखि महाकालीवारिबाट गयो भने नजिक एवं चाँडो पुग्न सकिन्छ, तर त्यहाँ बाटो छैन । जंगलको बाटो काँडैकाँडाले भरिनुका साथै दुई ठाँउमा चट्टाने भीर र पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ । अर्को समस्या पारिबाट सीमा सुरक्षा बलले देख्यो भने बन्दुक देखाएर तर्साउने गरिँदोरहेछ । त्यसैले, यो खतरा मोल्न पनि सकिँदैन । दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ । तेस्रो बाटो भनेको गागा छाड्ग्रुबाट नेपाली अन्तिम गाउँ टिंकर हुँदै छ्यालेक, टाटा हुँदै पुग्न सकिँदोरहेछ । त्यहाँ कुनै समस्या छैन, तर बाटो लामो र घुमाउरो हुनुका साथै लेक लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुने रहेछ । यसै बाटो प्रयोग गर्दै हरेक वर्ष स्थानीय व्यापारी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित ताब्लाकोट आउने–जाने गर्नुका साथै कैलाश मानसरोवरको दर्शन पनि गर्दा रहेछन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि सम्झौताअनुसार नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाली सीमा कालापानी बनाइएको कृत्रिम नदीको मुहानभन्दा करिब ११ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने लिम्पियाधुरा नै हो भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिन्क्याङ रेसम मार्गमात्रै ३० किलोमिटर रहेको छ, जसबाट बुझ्न सकिन्छ दुई देशबीचको व्यापारिक नाका खोलेर नेपाललाई व्यापारिक पर्यटकीय अनि धार्मिक दृष्टिकोणबाट पन्छाउन खोज्नुका साथै सीमा अतिक्रमण गरेर दासता नेपालमाथि लाद्न खोज्नु र अहमता देखाउनु हो ।
सन् १९६२ मा सीमा विवाद र युद्धताका सीमा सुरक्षाका लागि भारतले आफ्ना फौज लादेको क्रममा अप्ठ्यारो जमिन परेको हुँदा सेल्टरका लागि उनीहरु नेपाली भूमि अथवा कालापानी क्षेत्रमा टेन्ट गाडेर बसे, तर लडाइँ सकिए पनि ठाउँ छोडेनन् । बरू, एकतर्फीरुपमा नेपालको भूभागमा सेना तैनाथ गरिराख्यो । त्यसबेला पनि स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए, तर सम्बन्धित निकाय तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समेत अधिकारिकरुपमा पहल एवं प्रतिकार नगरिएकाले नेपालको कालापानीसँगै थप केही भूभाग मिचिएका छन् ।
राजनीतिको सुरूआतदेखि नै कालापानीलाई जोगाउन संविधान सभा सदस्य गणेश ठगुन्ना र प्रेमसिंह धामीले संघर्ष गरेका थिए । जबसम्म कालापानीलाई फेरि आफ्नो बनाउन सकिन्न तबसम्म यो जीवन त्यही माटोका लागि भनेर प्रतिज्ञा गरेका थिए । उनी काठमाडौँ आउँदा भारतीय अधिकारीले उनको लागि त्यो बाटो आउने अनुमति नदिएर नेपालकोे पैदल बाटो आउन परेको पनि रहेछ त्यतिबेला ।
लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा सशस्त्र बलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपथ्र्यो । राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेकाले कालापानी लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि खोसिएला भन्ने अवस्था खडा हुँदै गएको छ ।
नेपालको मानचित्रमा सामरिक मह¤व राख्ने जिल्लाका रुपमा दार्चुला राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अखण्डताको दृष्टिकोणबाट पनि संवेदनशील र सिंगो मुलुकको हकमा पनि यसको विशिष्ट मह¤व छ । नेपालको मित्रराष्ट्र मानिँदै आएको उत्तरी मुलुक चीनको अर्को प्रस्ट कुरा के हो भने व्यापार वृद्धिका नाममा नेपालको भूमि लिपुलेकलाई लिएर भारतसित गरेको सम्झौताले चीन नयाँ विस्तारवादी शक्तिका रुपमा यस क्षेत्रमा देखा परेको थियो । तर, वामपन्थीहरु समेत चीनले आफ्ना लागि केही गरिदिन्छ कि भनेर बडो आशापूर्ण दृष्टिले हेर्ने गर्छन्, यो साँच्चीकै उदेकलाग्दो स्थिति हो ।
हाम्रा क्रान्तिकारीहरु चीनविरूद्ध बोल्न नसक्ने मात्र होइनन्, दस्तावेजमा चीनका बारेमा प्रस्ट लेख्न असमर्थ भए । पुँजीवादको विकासको कोणबाट मात्र नभएर राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा पनि अब भारतको र चीनको प्रशंसा गर्नुको अर्थ छैन । यिनले एकअर्कासित हात मिलाइसकेका छन् । भारत त खारिएको बनियाँ हो । बनियाँ जे गर्दा आर्थिक फाइदा हुन्छ त्यही गर्छ । यो सत्य हो, भारतले नेपालमाथि आर्थिक, राजनीतिक हस्तक्षेप र दक्षिणी सिमानामा अतिक्रमण गर्ने काम गरेको छ । तर, भारतले हालै नेपालको लिपुलेकको सन्दर्भमा जे ग¥यो यो सामान्य कुरा होइन । यसले राष्ट्रिय स्वाधीनताका सन्दर्भमा निकै खतरनाक संकेत दिन्छ । एउटा पुँजीवादी, विस्तारवादी मुलुकले जे गर्छ यसले त्यही गरेको छ ।
लिपुलेकको सवाल विगतदेखिकै हो, तर वक्तव्य अथवा विरोधपत्रमा सीमित हुने गर्दै आयो । सशक्त प्रतिरोधात्मक आन्दोलनका साथै राज्यपक्षबाट समाधान खोजिएन वा गरिएन । छिमेकी दुःखको साथी हो, हुनुपर्छ । एकअर्कामा सघाउनु असल छिमेकीको कर्तव्य हो । छिमेकबीचमा मित्रताको गाँठो बलियो हुनुपर्छ । दक्षिणी छिमेकीका रुपमा रहेको भारतसँग नेपालको परापूर्वकालदेखि नै गहिरो सम्बन्ध रहेको भनिन्छ । मानवजीवनको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक र आर्थिक आदि बहुपक्षीय सम्बन्धको आवश्यकताको निरन्तरतामा किन अवरोध खडा गर्दछ ?
द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको उत्तरी छिमेक चीनभन्दा भारतको नियत बेलाबेला शंकास्पद, अष्प्रस्ट, द्वैद्व चरित्रको र उदासीन देखिने गरेको छ । यस्ता चरित्रले गर्दा भारत नेपालका लागि निर्धक्करुपमा असल छिमेकी बन्न सकेको छैन । घरीघरी भारतले नेपाललाई बिरालोले मुसा खेलाएझैँका गतिविधिमा हामी पाउँछौँ । एउटा असल छिमेकीको हैसियत राख्न व्यवहारमा चुक्ने गर्छ । नेपालमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने, कमजोरीपनको फाइदा उठाउने, आम्दानीको स्रोतमात्र बनाउने, छिमेकीको अस्तित्व स्वीकारभन्दा अस्तित्व गिराउने, उपनिवेशिक प्रान्तजस्तो ठान्ने आदि गैरछिमेकी क्रियाकलाप र नीतिले भारतको हस्तक्षेप नेपालमाथि रहँदै आएको छ । नेपालमा खेल्न उसले बडो टेक्निक, ट्याक्टिस र बुद्धिमानी चालबाजी अंगीकार गर्दै आएको पाउँछौँ ।
भारतले बलिको बोको बनाउने जुक्ति पछ्याउने गरेको छ । कहिले साह्रै ज्ञानी, अनुशासित, सहयोगी र दानी छिमेकी हुँ भनेजस्तो पारेर नेपाललाई अत्यन्त सहयोग गर्न खोजेजस्तो भान पारिदिन्छ । एक–दुईवटा सहयोग पनि गरिदिन्छ । साँच्चै भारत नेपालप्रति सहयोगी छ भन्ने भ्रम पारिदिन्छ । तर “माछो माछो भ्यागुतो” बनाइदिन्छ । यो उसको परम्परागत खेल हो, नीति हो ।
पछिल्ला दिनहरुमा पनि नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक समस्याप्रति चिन्तितजस्तो देखियो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन र संविधान बनाउन भारत हरदम सहयोगी बन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आयो । नेपालमा संविधान बनेर शान्ति स्थापना भएको अनि प्रगति, उन्नति र समृद्धि हेर्न चाहेका कुराहरु छिमेकी मुलुकका सरकारप्रमुखलगायत मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट व्यक्त भयो । नेपालको संविधानसभाको चुनाव गर्न सहयोगको तत्परता पनि देखायो । नेपालमा सरकार र राजनीतिक दलहरुको आत्मा खोतल्यो । अझ एमाओवादीदेखि कांग्रेस, एमालेसम्मका नेताहरुलाई पालैपालो दिल्ली बोलाएर नेपालको शुभ चिन्ता व्यक्त गरी ढुक्क बनायो । यो एकातिरको दृश्य भयो । तर, अर्कोतिर द्वैद्व चरित्रको पराकाष्ठा प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
बेलाबेला निकै ठूलो, गम्भीर, खतरनाक र षड्यन्त्रमूलक घटनाहरु घटाउँदै आएको छ । कहिले राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गरेर त कहिले नाकाबन्दी गरेर अनि कहिले नेपालीको घरमा हतियारसहित खानतलासी, कहिले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर शक्ति दुरूपयोगको अराजकता र हेपाहा प्रवृत्तिको पराकाष्ठामा पुग्ने गरेको छ । यसले हिजोदेखिकै दमनकारी घटनाहरुको निरन्तरतालाई हाजिर गराउँदै भविष्यसम्म जारी रहने संकेतको ग्यारेन्टी गदछ ।
नेपालको वातावरण हुँडलेर सक्दो फाइदा लिन चाहेको पुष्टि गर्दै नेपालीको तत्कालीन महान् पर्व विजयादशमीको बेला नाटकीय नाकाबन्दी गरेको सबैको स्मरणमा छ । चाडपर्वको बेला नेपालीको नुन, तेल, मरमसला, खाद्यान्न, रासन रोकेर दसैँ बन्द, मुख बन्द गरेर र इन्धन रोकेर आवतजावत नै ठप्प पारेर के हर्कत गरेको थियो सबैमा ताजै छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पारवहन र मानवीयताविरूद्ध उत्रेर दादागिरी गरेकै हो । नेपालका सार्वभौम संविधानमाथि हस्तक्षेप र स्वामित्व खोजेर कस्तो लोकतान्त्रिक छिमेक बन्न खोजेको हो ?
द्विपक्षीय आपसी सम्बन्धको मान्यतामा प्रश्न उठाएर नेपाल–भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध, मर्यादा ध्वस्त पार्न चाहन्छ । छिमेकी देशले शक्तिको अराजकता यसरी बढाउँदै जाने हो भने नेपालीको धैर्यता कति रहला ? यो हस्तक्षेपमा सम्बन्धित राष्ट्रको दूतावास पनि एउटा विज्ञप्तिको झटारोले झारा टार्ने कोसिस गर्दैछ ।
यस्ता घटनाहरु थोरै होइन धेरै छन् । नेपाल र नेपाली आजित भइसकेका छन् । बोर्डर एरियाहरुमा भारतीय सुरक्षा फोर्सबाट दैनिकरुपमा नेपाली हेपिने, चेपिने र पिटिने गरेको त सामान्य नै भइरहँदा घरघर, बस्ती–बस्ती खानतलासी हुने घटना पनि कम छैनन् । कहिले महेशपुरको सुस्तामा किल्ला मिचिन्छन् र नेपाली बस्ती उठाइन्छ । कहिले हतियारसहित भारतीय सुरक्षा फोर्स तैनाथ गरिन्छ । कहिले ठोरीका नेपाली बस्तीमा छापा मारिन्छ । कहिले बाँके र बर्दिया हडप्ने प्रयास हुन्छ । कहिले दसगजाका किल्ला उखेलेर सारिन्छ । तमाम ठाउँहरुमा नेपालीमाथि दुव्र्यबहार मात्र होइन आक्रमण नै गरिन्छ । फौजी र राजनीतिक हस्तक्षप लादिन्छ ।
सुस्ता, महेशपुर, मानेभञ्ज्याङ, कालापानी, कैलालीको भजनी र लालबोझी, कञ्चनपुरको प्याराताल परासन, बाराको भटिर्वा, वीरगन्जको अहिर्वा आदिको व्यथा, मर्म, वेदना र पीडा कहिले छैन र ? फेरि लिपुलेक हस्तक्षेप र अतिक्रमणको चपेटा पनि ?
राष्ट्रवाद कमजोर हुनुको परिणति हुन् यी । राष्ट्रियता निरीह र अशक्त हुनुका द्योतक हुन यी । राष्ट्रियताका मुख्य आधार स्तम्भहरु आर्थिक, सांस्कृतिक, भूगोल र राजनीतिमाथि नै चौतर्फी हस्तक्षेपकारी भारतको नीति सफल हुँदै जानुले नेपाल र नेपाली निरीह बन्नु परेको छ । आर्थिकरुपमा उसैको साम्राज्य चलेको छ । सांस्कृतिकरुपमा उसको पहिचानले स्थान जमाएको छ । राजनीतिकरुपमा उसैको निर्णयात्मक भूमिका रहँदै आएको छ । भूगोलमा उसैको अतिक्रमण बढ्दैछ र दादागिरी हाबी हुँदै आएको छ । भारतको हस्तक्षेपलाई दैवी शक्तिको विनासकारी भवितव्यजस्तो रुपमा लिनुपर्ने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोपजस्तो ठान्न र स्वीकार्न बाध्य छन्, नेपाली ।
प्रजातन्त्र चाहिने हो भने राष्ट्रियता गुमाएको सिक्किमजस्तो भन्थे, आज नेपालको दुर्दशा उस्तै हुँदै गइरहेको छ । हामी उत्तरको छिमेकबाट प्रताडित त्यति छैनौँ, जति दक्षिणको छिमेकबाट छौँ । एउटा छिमेकले अर्कोलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो । छिमेकी बलियो भए आफू पनि बलियो भइन्छ भन्ने किन सोच्दैन भारत ? त्यत्रो बेलायती पराधीनता र साम्राज्यवादको पीडा छिचोलेर स्वतन्त्रताको सास फेरेको छिमेकी भारतले त्यही पीडा अर्को छिमेकमाथि प्रतिस्थापन किन गर्दछ ? नेपालीलाई स्वाभिमान र शान्तिसँग बस्न र बाँच्न नदिने गरी हस्तक्षेप, अतिक्रमण र आक्रमणको परम्परा नछोड्ने कसरी असल छिमेकी हुनसक्छ भारत ?